Madaxweynaha cusub Hirshabeelle oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Beledweyn (Sawirro) - iftineducation.com
Madaxweynaha cusub Hirshabeelle oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Beledweyn (Sawirro)
aadan21 / October 20, 2016
iftineducation.com – Madaxweynaha cusub Hirshabeelle oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Beledweyn (Sawirro)
Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Madaxweyne Cosoble ayaa waxaa si weyn loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha ee magaaldaa Beledweyne.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana soo dhaweeyey xubnaha ugu sareeya maamulka gobolka gobolka Hiiraan iyo shacabka ku dhaqan magaalada Baledweyn.
Xubnaha wafdiga ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale waxaa xubnaha wafdiga ka mid ah Maxamed Cabdi Waare oo ahaa musharixii la tartamay Madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Jowhar.
Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa lagu wadaa in uu kulamo la yeesho waxgaradka reer Hiiraan iyo dadka diidan dhismaha maamulka Hirshabeele. Madaxweyne Cosoble ayaa booqasho ugu tegey hotelka uu ka degen yahay magaalada Beledweyne Ugaas Xasan Ugaas Khaliif hase yeeshee ma jiro wax wadahadalo ah oo ay yeesheen.
Akhriso Magacyada 11-ka Xubnood ee Puntland ku matalaya Aqalka sare (Daawo Sawirada)
Beesha Caalamka oo aan wax taageero ah u Muujin Maamulka Hirshabeele iyo Baaq loo diray Hogaanka cusub ee Maamulkaas